काठमाडौं आइपुग्यो ‘विप्लव’ नेकपाको वार्ता टोली
वीरेन्द्र ओली मंगलबार, फागुन १८, २०७७, २२:४९
काठमाडाैं– सरकारसँग वार्ता गर्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको वार्ता टोली काठमाडौं आइपुगेको छ।
सोमबार बुटवलबाट हिँडेको टोली मंगलबार साँझ काठमाडौं आइपुगेको हो। विप्लवको वार्ता टोलीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ रहेका छन्।
‘हिजो साँझ नै उहाँहरु हिँड्नु भएको हो। तर सुरक्षाका कारण आज मात्र काठमाडौं आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरुलाई हाम्रै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुले सुरक्षा दिइरहनु भएको छ,’ एक नेताले नेपाल लाइभसँग भने।
यता गृह मन्त्रालयले पनि उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दिएकाे स्राेतले जनाएकाे छ। यद्यपि विप्लवका टाेली बसेकाे स्थान भने गाेप्य राखिएकाे छ।
सरकारले मंगलबार ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक रहेको दुई सदस्यीय टोली बनाएको थियो।
सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन्। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवादेखि मुद्धासम्म फिर्ता लिने तयारी थालेको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिइनेछ।
सरकारले २८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारी पक्षबाट आमसभा, कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षणलगायतमा प्रतिबन्धसँगै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न सुरु भएको थियो। प्रतिबन्ध लगाएदेखि गत फागुन १० गतेसम्म २ हजार ९८ जना नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
यसरी पक्राउ पर्नेमा पूर्णकालिन कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म छन्।
के हो एमालेमा ‘कर्णाली विद्रोह’को संकेत?
विभाजित कम्युनिस्टहरू २०७८ मा कता?
नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन देउवाको आलटाल !